गाइडले ३० हजार अमेरिकी डलर पारिश्रमिक लिने
हिमालमा काम गर्ने पर्वतारोहण पथप्रदर्शकले ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म पारिश्रमिक लिने गरेका छन्। यो हालको विनियम दरअनुसारको करिब ३३ लाख रुपैयाँ हो। आरोहीलाई शिखर चढाएर आधारशिविर झारेवापत् उनीहरुले वार्षिक ३३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने गरेका छन्। हिमालमा वर्षमा दुई पटक आरोहण हुने समयमा बढीमा दुई महिना काम गरेबापत् पर्वतारोही पथप्रदर्शकले यो पारिश्रमिक लिने गरेका छन्। पुरा पढौ
किङ्ग क्रियशनले आयोजना गरेको ‘मिस्टर एण्ड मिस मोडल अफ म्याग्दी’ सौन्दर्य प्रतियोगिताको उपाधि बेनीको क्याम्पसचोककी हेना खड्का छन्त्यालले जितेकी छिन् । बेनीमा शनिबार भएको फाइनलमा ३२ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै १४ वर्षीया छन्त्यालले मिस्टर एण्ड मिस मोडल अफ म्याग्दीको उपाधि र ताज पहिरिएकी हुन् । कालीपुलकी सोनिया पुन फस्ट रनरअफ भएकी छिन् । विजेता छन्त्यालले रु ५० हजार नगदसहित ताज र प्रमाणपत्र प्राप्त गरिन् । फस्ट रनरअफ सोनियालाई म्युजिक भिडियोमा अभिनयको… पुरा पढौ
धनगढीमा महोत्सवको तयारी पुरा
‘समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशको आधार, कृषि पर्यटन, उद्योग र ब्यापार’ भन्ने मुल नाराका साथ शुक्रबार देखी धनगढीमा सुन्दर सुदूरपश्चिम महोत्सव हुने भएको छ । आयोजक धनगढीको बिश्वज्योती युवा क्लव र शक्ति युवा क्लवको बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको जानकारी दिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका २ पुरानो भन्सारमा शुक्रबार देखी सुरु हुने महोत्सव माघ २ गते सम्म चल्ने छ । महोत्सवमा ३ सय स्टल रहने छन् ।… पुरा पढौ
तनहुँ कोलाहल र धुँवाधुलोबाट केही टाढा घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको छ भने तनहुँको बन्दीपुर उत्कृष्ट गन्तव्य हुनसक्छ । सदरमुकाम दमौलीदेखि १८ किलोमिटर पूर्व डुम्रे हुँदै ८ किलोमिटरको उकालो यात्रा तय गरेपछि बन्दीपुर पुगिन्छ जहाँबाट मनोरम हिमशृङ्खला, पहाड, टाकुरा अवलोकन गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक सुन्दरता बोकेको बन्दीपुरबाट अन्नपूर्ण, माछापूच्छ्रे, धौलागिरि लगायतका हिमशृङ्खला देखिने भएकाले यहाँ पुग्ने जो कसैको मन लोभिने गर्दछ । भक्तपुरे शैलीमा निर्माण गरिएका घरहरू, टुँडिखेल, थानीमाई, तीनधारा,… पुरा पढौ
राममाया अर्थात् १२ वर्षमा भर्खैरै आमा बनेकी गंगा प्रजाको आमा गंगाले अपरेशन गरेर छोरी जन्माएकी हुन् । दुई घण्टा लामो अपरेशनपछि उनी आमा बनेकी हुन् । तर, नवजात शिशुलाई सम्हाल्न गाह्रो भएको छ, उनलार्इ । उनक लागि यो सपना जस्तै भएको छ । तर, सपना होइन । २.२९ केजीको छोरी यथार्थ हो । गंगा सकुशल रहेकी छिन । र, बच्चालाई आइसियुमा राख्नु पनि परेको छैन् । जटिल सोचिएको थियो तर… पुरा पढौ
के तपाईं वर वा बधूको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यदि तपाईं विवाह गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ ? आमाबुबाले मागी विवाहको प्रबन्ध गरिदिनु भएको छैन भने अब अनलाइन पोर्टलमार्फत वरबधु खोज्न सक्नु हुनेछ। https://www.myswayambar.com/ नामक अनलाइन पोर्टलको प्रारम्भ भएपछि आमाबुबाको मागी बिहे प्रबन्ध कुर्नु नपर्ने भएको हो । राष्ट्रियसभाका सदस्य कोमल ओलीले उक्त पोर्टलको आज यहाँ शुभारम्भ गरेपछि संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीले आवेदन भर्ने, आफूलाई चित्त बुझ्ने योग्यता भएका वरबधुको खोजी गर्न सक्ने… पुरा पढौ
दुई श्रीमती बिहे गर्नेलाई सरकारले भत्ता दिने
दुई श्रीमती हुने पुरुषले नेपालमा ठूलो कानुनी झमेला बेहोर्नु पर्ने नयाँ कानुन बनिरहेका बेला संयुक्त अरब इमिरेट अर्थात् युएइमा भने सरकारले नै अतिरिक्त घर भाडा भत्ता दिने भएको छ । अविवाहित महिलाहरुको बढ्दो संख्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पुरुषहरुलाई दोश्रो बिहे गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न यस्तो अनौठो नियम लागू गरेको अन्तराष्ट्रिय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । युएइका मन्त्री अब्दुल्लाह बेलहेफ अल नुइमीले संघीय राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा यो अनौठो घोषणा गरेसँगै अब… पुरा पढौ
यसपटकको लक्ष्मी स्मृति पुरस्कारबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङलाई सम्मान गरिने भएको छ । प्राध्यापक तारा बराल संयोजकत्वको प्रतिभा छनोट समितिले उनलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका सदस्यमा सहप्राध्यापक रामगोपाल ढेवाजु र पत्रकार रवीन्द्र बास्तोला सदस्य थिए । पुरस्कारको राशि नगद ३० हजार ५ सय ५५ सहित दोसल्ला र सम्मानपत्र छ । नेपाली भाषा, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, ज्योतिष विज्ञानको उच्च अध्ययन र अध्यापनद्वारा पुर्‍याएको… पुरा पढौ
थाहा नगरपालिकामा प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण
पर्यटकीय नगरी थाहा नगरपालिकामा प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण उडान भएको छ। तीन नम्बर प्रदेश सरकारले ‘घुम्न जाऔं दामन’ वर्ष घोषणा गरेको थाहा नगरपालिका–१० को विसिङ्खेलमा रहेको आइतबारे चौरमा प्याराग्लाइडिङको सफल उडान भएको हो। प्याराग्लाइडिङका प्रवर्द्धक तथा पर्यटन व्यवसायी बैकुण्ठ थापा र पाइलट सागर क्षेत्रीले प्याराग्लाइडिङ उडाएका थिए। थाहानगर–२, कुटीप्वाकलबाट यसअघि प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ। काठमाडौंबाट नजिक रहेको विसिङ्खेलमा व्यावसायिक रुपमा प्याराग्लाइडिङ उडाउने लक्ष्यका साथ परीक्षण उडान गरिएको… पुरा पढौ